Bahamas wuxuu u magacaabay I. Chester Cooper inuu noqdo Wasiirka Cusub ee Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Bahamas wuxuu u magacaabay I. Chester Cooper inuu noqdo Wasiirka Cusub ee Dalxiiska
Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Wasiirka cusub ee dalxiiska iyo duulista hawada ee Bahamas
Hawl -wadeennada iyo shaqaalaha Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas waxay si diirran u soo dhoweynayaan Ra’isul -wasaare -ku -xigeenka, Mudane I. Chester Cooper, oo loo magacaabay Wasiirka Dalxiiska, Maalgashiga iyo Duulista 17 -kii September, maalin kadib Doorashadii Guud ee dalka. Magacaabista golaha wasiirrada ee DPM Cooper ayaa ka mid ahayd xilalkii ugu horreeyay ee uu magacaabay maamulka cusub ee Xisbiga Horusocod, kaasoo qaaday guushii codbixinta 16 -kii September, 2021 -kii.
Xaaladda caalamiga ah ee ganacsigu aad bay muhiim ugu tahay ballaarinta joogtada ah ee qaybaha Dalxiiska, Duulista iyo Maalgashiga ee Bahamas.
Tamarta Wasiir Cooper iyo kartida ganacsi ee fiiqan ayaa dhab ahaan ah waxa loo baahan yahay iyadoo Wasaaraddu ay sii waddo dadaalka ku aaddan soo kabashada dalxiiska.
Mr. Cooper wuxuu ku fadhiyaa hoggaanka isagoo si weyn ugu baraarugsan hawsha weyn ee sugaysa.
Agaasimaha Guud ee Dalxiiska Joy Jibrilu ayaa yiri: “Annagu haddaan nahay Wasaaradda Dalxiiska waxaan si farxad leh u rajaynaynaa inaan ka hoos shaqayno hoggaanka cusub ee Wasiir Cooper, kaasoo Wasaaraddeenna u keeni doona aqoonta iyo waayo -aragnimada badan ee uu ka soo kasbaday waayihiisa nololeed si guul leh hogaamiyaha qaybta gaarka loo leeyahay. Tamarta Wasiir Cooper iyo sumcaddiisa ganacsi ee fiiqan ayaa dhab ahaan ah waxa loo baahan yahay iyadoo Wasaaraddeennu ay sii waddo dadaalka ku aaddan soo kabashada dalxiiska iyada oo ay jirto masiibo joogto ah. ”
Wasiir Cooper wuxuu qirayaa in dhammaan meheradaha muhiimka ah ee ku jira Bahamas The waxaa hogaamiya beesha caalamka iyo fahamka xaaladda guud ee ganacsiga ayaa gabi ahaanba muhiim u ah fidinta waarta ee Dalxiiska Bahamas, Waaxaha Duulista iyo Maalgashiga. Maaddaama uu yahay qof guulo badan ka gaaray hoggaaminta waaxda gaarka loo leeyahay, Mr. Cooper wuxuu qabtaa hoggaanka meheradda koowaad ee qaranka isagoo wacyigelin degdeg ah u leh hawsha baaxadda leh ee sugaysa. Wuxuu ka faa'iideysanayaa fursadda uu ugu kici karo caqabadda adeegga dalkiisa uu jecel yahay.
Wasiir Cooper waa kan ugu yar 12 jir wuxuuna qabaa Cecelia Cooper. Waa waalidiin ku faanaya saddex carruur ah.
Halgankiisii ​​hore wuxuu ku riixay inuu noqdo geesi, adkaysi iyo is -hoosaysiin; Tayada si fiican ugu adeegtay markii uu fuulay jaranjarada shirkadda si uu u noqdo Guddoomiyaha & Maamulaha BAF Global Group iyo Madaxweynaha & Maamulaha BAF Financial & Insurance (Bahamas) Ltd.
Wuxuu ahaa Guddoomiyihii ugu horreeyey ee Guddiga La -talinta Caymiska iyo Agaasimaha aasaaska Sanduuqa Hantida Bahamas. Wuxuu xubin ka yahay Ururka Madaxweynayaasha Da'da yar (YPO), oo ah Maamule Toastmaster oo Sharaf leh wuxuuna ka shaqeeyaa Guddiyada qaybaha gaarka loo leeyahay ee kala duwan.
Raiisel wasaare ku -xigeenka Chester Cooper waa Ku -xigeenka Hoggaamiyaha Xisbiga Horusocod ee Horumarka (PLP) ahna Xildhibaanka laga soo doorto degaanka Exumas iyo Ragged Island.